သတင်း - လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်ရန်အတွက် ဘယ်လိုလက်သည်းဆိုးဆေး UV ဂျယ်ဆေးကို အကြံပြုထားပါသလဲ။
လက်သည်းပန်းချီ UV ဂျယ်လက်သည်းဆေးဂျယ်အဖြစ်လူသိများသည်။လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်လက်သည်းပန်းချီလုပ်ငန်းတွင် အသုံးများသော ဂျယ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။အကြောင်းမှာ၊လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်အလင်းရောင်ဖြင့် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်သည်၊ လက်သည်းဆိုးဆေးပုလင်းများအားလုံးသည် အလင်းဒဏ်ခံနိုင်သော အပြင်ဘက်ထုပ်ပိုးမှုဖြစ်သည်။ရောင်စုံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ဖယ်ရှားနိုင်သော လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်လ်သည် ဆိုးဆေးကင်းစင်သော၊ပြင်းထန်သော အရောင်ထွက်စွမ်းအား၊ ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သော အာနိသင်ကောင်း၊ ကျုံ့သွားခြင်းမရှိ၊ အရေးအကြောင်းမရှိ၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှုမရှိသော လက္ခဏာများရှိသည်။
လက်သည်းဆိုးဆေးသည် နောက်ဆုံးပေါ် လက်သည်းပန်းချီခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။အရောင်သစ်အလှတရားများလက်သည်း ဂျယ်ဆေး ထုတ်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊ အဆိပ်အတောက်မရှိ၊ ကျန်းမာပြီး ဘေးကင်းကာ၊ ဂျယ်နှင့် လက်သည်းဆိုးဆေးများ၏ ဘုံအားသာချက်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အရောင်သည် ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး လိမ်းရလွယ်ကူပြီး တောက်ပမှုကို ကြာရှည်ထိန်းထားနိုင်သည်။
လက်သည်းဆိုးဆေး၏ အခြေခံအချက်အလက်များသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လက်သည်းလုပ်ငန်း ထွန်းကားလာခြင်း၊UV လက်သည်းဆိုးဆေးလူတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရှာဖွေလာကြတယ်။လက်သည်းဆိုးဆေးရဲ့ အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတာ လက်သည်းဆိုးဆေးရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ထို့အပြင် လက်သည်းပေါ်တွင် အချိန်ကြာကြာနေနိုင်စေမည့် စံသတ်မှတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။လက်သည်းဆိုးဆေးသည် လက်သည်းပေါ်တွင် အချိန်ကြာကြာနေနိုင်သည်။လက်သည်းဆိုးဆေးကို မှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အောက်ပါတို့သည် စက်၏ ပြီးပြည့်စုံသော လည်ပတ်မှုအဆင့်များဖြစ်သည်။လက်သည်းဆိုးဆေး UV ဂျယ်Newcolorbeauty စက်ရုံတွင်။
၏အားသာချက်များNail Polish Gel ၊ :
လက်သည်းဆိုးဆေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် လက်သည်းဆိုးဆေးကို တဖြည်းဖြည်း အစားထိုးလာသည်။ဒါဆို UV Gel လက်သည်းဆိုးဆေးရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
1. Solvent-free၊ ဖယ်ရှားနိုင်သော၊ အနံ့မရှိသလောက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ခြင်း။
2. ခိုင်ခံ့သော ကပ်ငြိမှု၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ ကျုံ့မှုမရှိ၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိ၊ ရိုးရိုးလက်သည်းဆိုးဆေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လက်သည်းဆိုးဆေးကော်သည် ကြာရှည်ခံနိုင်သည်။
3. ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများကြောင့်၊ လက်သည်းဆိုးဆေး UV gel သည် အတော်လေး ပျော့ပြောင်းနိုင်ပြီး၊ ပြုလုပ်ထားသော လက်သည်းပုံစံများ ကွဲပြားကာ လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်တွင် ထူးခြားသော UV gel တစ်မျိုးလည်း ရှိသည်- အလင်းပြောင်းလဲနိုင်သော ဂျယ်သည် အပူချိန်နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် ထိတွေ့ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရောင်ခြည်။သြဇာလွှမ်းမိုးမှု စသည်တို့ကြောင့် လက်သည်းဆိုးဆေးသည် မတူညီသော သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အရောင်ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊
UV nail Gel ဖြင့် Nail Art ပြုလုပ်ခြင်း။နည်းလမ်း-
1. အမြှေးပါးများကို ပွတ်သပ်ပါ - ရိုးရှင်းသော ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံပါ။
2. Polishing strips - လက်သည်းမျက်နှာပြင်ကို ပွတ်ခြင်း။
3. Primer အပေါ်အလွှာ
4. နှစ်ထပ် အလင်းရင်းမြစ် မီးချောင်းကို စက္ကန့် 60 ဖုတ်ပါ။
6. dual light source lamp တွင် စက္ကန့် 60 ကြာ ဖုတ်ပါ။
8. dual light source lamp တွင် စက္ကန့် 60 ကြာ ဖုတ်ပါ။
10. dual light source မီးအိမ်တွင် နှစ်မိနစ်ကြာ ဖုတ်ပါ။
ဖယ်ရှားရန် အဓိကနည်းလမ်း နှစ်ခုရှိသည်။လက်သည်းဂျယ်အဆင့်များတွင်
1. လက်သည်းများကို ကွဲပြားသောဒီဂရီအထိ ပျက်စီးစေသည့် လက်သည်းဆိုးဆေးကို အသုံးပြုပါ ၊ ထို့ကြောင့် အကြံပြုထားခြင်း မရှိပါ။
အောက်ပါတို့သည် သံချပ်ကာ ဖယ်ရှားရေး ကိရိယာများကို အသုံးပြုရန် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
1. သံချပ်ကာဖယ်ရှားရေးကိရိယာအစုံကို ဖြုတ်ပါ။
2. သံချပ်ကာဖယ်ရှားရေးကိရိယာဖြင့်ထုပ်ပြီးနောက် 10 မိနစ်စောင့်ပါ။
3. လက်သည်းမျက်နှာပြင်ကိုဖယ်ရှားရန် စတီးလ်တွန်းလက်ကိုင်ကို အသုံးပြုပါ။
4. လက်သည်းမျက်နှာပြင်ကို ပွတ်ပါ။
အသစ်သောအရောင်အလှတရားသည်အမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့ရန်လက်ကား / ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။UV nail gel polish ထုတ်ကုန်များကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဖောက်သည်များအတွက်၊ သင်သည် စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းကို ရှာဖွေနေပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်ပါ။